कहिलेसम्म डरैडरको कैद हुने हो, यो जिन्दगी ?
जगत्‌मा डरको विकराल कालको औतारमा कोरोना हाजिर छ । नाङ्गा आँखाले कतै देखिनु छैन, तर संसारैभरि फुक्काफाल यो व्याप्त छ । जान्नेहरू भन्छन्- विश्वभर व्याप्त कोरोनालाई बटुल्ने हो भने जम्मा एक मुट्ठी पनि हुँदैन ।
यो सूक्ष्मातिसूक्ष्म कोरोनाले ‘मै हुँ’ भन्ने मानिसमा उग्रातिउग्र त्रास जगाएको छ । यो नाथे भय–संक्रामक कोरोनाले देशलाई देशबाट अलग्याएको छ, समुदायलाई समुदायबाट, मान्छेलाई मान्छेबाट । र, हर मान्छे आफूलाई आफैँबाट । मान्छेमा उत्पन्न मान्छेको डरले मान्छे–मान्छेबीचका भावना र प्रेमका तन्तुहरू चाटचुट्टै छिनेका छन् । र, मान्छे आफ्नै घरको साँघुरो घेरोमा आफ्नै मनको पिन्जराको निरीह कैदी बन्न अभिशप्त छ ।
विपद्‌मा मान्छेले स्वभावतः मान्छेको सहारा खोज्छ । तर, कोरोनाकालमा जहाँ पनि र प्रायः जो पनि सहारा होइन, संक्रमणवाहक त्रासको औतारमा उपस्थित छ । छिमेकी डरको औतारमा उपस्थित छ, टोलिया डरकै औतारमा, नगरवासी डरकै औतारमा । चर्को विपद्‌मा मान्छेले खोज्ने आखिरी सहारा सरकारको हो । सरकार हुनुपर्ने वास्तवमा नागरिकको भर–अभरको साथी र सहयाेगी हो । तर, कहालीलाग्दो कोरोना महामारीमा सरकार स्वयम् डरको कारक एवं विस्तारक भएको छ ।
सरकार भन्छ, ‘सत्तरी वर्षमाथिका घरबाहिर ननिस्क, निम्छरो ज्यान कोरोनाले मार्ला !’ झट्ट सुन्दा सरकारले मलाई नै हेरेर भनेझैँ लाग्छ । र, यसो गमेर ल्याउँदा सरकारले मजस्ता बूढापाकालाई बचाउन खोजेको पो हो कि भनी आस जाग्छ । तर, ढल्दो उमेरका जनलाई डर देखाउँछ र पाषाणहृदयी सरकार आफ्नै विलासी खोपीमा लुत्त लुक्छ ।
बुढापाका गृह नजरबन्दमा थुनिएका छन् । निसालाग्दो थुनाबाट घ्रिच्रो तन्काउँदै ती बाटो हेर्छन् । सरकार आओस्, सुखदुःख सोधोस्, दबाइमुलो गरिदेओस् । आपत्‌मा ढाडस देओस्, निराशामा आस जगाओस् । र, यो एक्लोपनको बेचैनीमा तिमी एक्लो छैनौ भन्ने उत्साहवर्द्धक वचन देओस् । तर, खोपीवासी विलासवीर सरकारको नाक–मुख कतै देखिँदैन । बन्दुकको बलले बुढापाकालाई घर–घरमा थुनेर, कानमा तेल हालेर सरकार ढुक्कै सुत्छ । यसको अप्रकट अर्थ हो- उपरवाले ख्वामितकाे आदेश मान र बस्तीमाझको एकलास घरमा एक्लिएर एक्लै मर ! मलाई झोँक चल्छ, यो महामारीमा सरकार नागरिकलाई बचाउन होइन, मार्न पो आतुर छ बा !
कतै नभा'को जात्रा हाँडीगाउँमा, कतै नभा'को लकडाउन नेपालमा ! लकडाउन पनि थोरै होइन, चार–चार महिना लगातार ! सरकारले ‘कोरोना–कोराना’ भन्दै पुरेतले झैँ मन्त्र जप्यो । सञ्चार जगत्‌काे विशाल खण्ड ‘कोरोना–कोरोना’ भनेर लगौँटीको फुर्को हल्लाउँदै कुद्यो । लकडाउनको अत्यास असह्य भएर थुप्रै युवासमेतले आफ्नै हातले आफ्नो ज्यान लिए । कति नारी सुत्केरी ब्यथाले मरे । कति बिरामी किड्नी, क्यान्सर, क्षयरोग, झाडापखाला, बालरोग आदिले सकिए ।
कोरोनाको सुगा रटानसामु यी अकाल मरण खासै खबर बनेनन् । खबरको शीर्षक पनि कोरोना भयो, पेटव्यहोरा पनि कोरोना र पाद टिप्पणी पनि कोरोनै भयो । समाचारको सबै जग्गा नाथे कोरोनाले ढ्याप्पै ढाक्यो । तर, सरकारले न कोरोनालाई निमिट्यान्न पार्ने जुक्तिमा बुद्धि पुर्‍यायो, न नागरिकका अरु व्यथालाई वास्ता गर्‍यो । आखिर यो चारमहिने लकडाउनमा सरकारले गर्‍योचाहिँ के ? बिजुलीको लट्ठामा बसेको काग सुटुक्क भन्छ- मनुवा, सरकारले खाने काम गर्‍यो । यो अगस्तीले फेरि के खाने काम गर्‍यो, कौवा ? कमिसन, घूस, सलामी, कोसेलीपात आदि । निहुँ कोरोना भयो, दाउ खानु भयो । हन्तकाली सरकारले बितायो !
सरकारले कोरोना पर्वमा कम्तीमा १८/२० अर्ब रकमको खोलो बगायो होला । त्यो विशाल नखत–प्रवाहको नतिजा भयो के ? महामारीको उल्टै हाहाकार भयो ! र, अहिले सरकार १० वर्ष तल झरेर डर देखाउँदै छ, ‘६० वर्षमाथिका घरमै लुक, कोरोनाले बिताउला !’ खान नपाए जिउँदो प्राणी मर्छ । बिनाकाम र बिनादाम घरमा लुकेर जिउँदो मान्छेले खाने के ? सरकार देखिँदैन, अदृश्य भगवान् बोल्दैन ।
अन्तअन्त लकडाउन गर्दा सरकार धेरथोर दयालु देखिएका छन् । बुटिटाट जनलाई तिनले थोरैतिनो चारोको चाँजो मिलाएका छन् । नेपालमा तातोभुत्लो केही छैन । दूर दरबारबासी सरकार ठान्दो हो, 'मेरो पेट दुनियाँको पेट हो । मैले टन्न खानु दुनियाँले टन्न खानु हो । बस्, म खुब खान्छु, टन्टै खलास !'
६० वर्ष यताउता मान्छेको गरिखाने उमेर हो । घरै बसेर चाकमा फोका उठाउने उमेर यो किमार्थ होइन । यो उमेरको मान्छे मास्टर भए पढाउँछ, कर्मचारी भए माखा मार्छ, व्यापारी भए व्यापार गर्छ, उद्यमी भए उद्यम गर्छ, स्वास्थ्यकर्मी भए उपचार गर्छ, सञ्चारकर्मी भए सूचनाको सिकार गर्छ, सुरक्षाकर्मी भए तीघ्रा ठटाउँछ, मन्त्री भए कमिसन खान्छ, चोर भए चोर्छ । गरिखाने उमेरका यी सबलाई डर देखाउँदै ‘घरबाट बाहिर ननिस्क, कोरोनाले निल्ला’ भन्नु तिनलाई भोकै मर्न एकलासमा छाडिदिनु हो । यस्तो सरकारलाई म जनरक्षक सरकार भनूँ कि जनभक्षक सरकार भनूँ ? क्या फसाद !
प्रकाशित मिति: बुधबार, मंसिर २४, २०७७, ०७:१४:००